बिचित्र संसार – Page2– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० आश्विन २०७७, शनिबार १७:१६ English
क्यानाडाको म्यानिटोबामा आश्चर्यजनक संयोग, हरेक वर्ष झण्डै ७० हजार सर्पको भेला २८ श्रावण २०७६, मंगलवार ०४:५७
दुर्घटनामा परेर आँखा देख्न छोडेको गधालाई चश्मा २४ असार २०७६, मंगलवार १६:१३
डेभोन, २४ असार । दुर्घटनाका कारण आँखाको दृष्टि गुमाएको एक गधाले चश्मा पाएको छ । जोन्टी नामक त्यस गधाको आँखा काँडाले घोचेर फुटेको थियो । उसको आँखाबाट काँडा हटाइयो र शल्यक्रियाका क्रममा भएको स्ट्रेसका कारण उसको दृष्टि गुम्दै गयो । दृष्टि पुनः प्राप्त गराउनका लागि जोन्टीले विशेष..
बाघको जुँगा उखेल्नेलाई पाँच लाख जरिवाना १८ असार २०७६, बुधबार १२:२६
रासस, बर्दिया, १८ असार । बाघको जुँगा उखेल्ने एक जनालाई बर्दिया जिल्ला अदालतले पाँच लाख जरिवाना तिराएको छ । बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका ४ शान्तिपुर निवासी सुन्दरलाल चौधरीलाई अदालतले मरेको बाघको जुँगा उखेलेर घरमा लुकाएको आरोपमा रु पाँच लाख जरिवाना तिराएको हो । उनलाई बाघ मारेको..
भाइरल बनेको नग्न तश्वीर मोडल रितिका जिरेलको १७ असार २०७६, मंगलवार ०२:१५
काठमाडौं ।असार १५ को दिन भाइरल बनेको फोटो मोडल रितिका जिरेलको भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । भाइरल बनेको फोटोमा मोडल रितिकाले शरीरका गोप्य अंग छोपेर फोटो सुट गराएकी थिइन् । फोटोबारे अनेकन टिप्पणी भएपनि कतिपयले कसको फोटो भन्नेसम्म भेउ पाउन सकेनन् । धेरैले उक्त फोटो विकृत जनाउने भन्दै..
दुई अर्ब भारतीय रुपैयाँको वैवाहिक कार्यक्रम, तीन सय क्वीन्टल फोहोर विसर्जन १७ असार २०७६, मंगलवार ०१:५९
अउली, भारत, १६ असार (एएनआई)। भारतको उत्तराखण्डको अउली नगरमा एक बैबाहिक कार्यक्रमका क्रममा थुप्रिएको करिब तीन सय क्वीन्टल फोहोर विसर्जन गरिएको छ । नगर निगमका अधिकारीहरुका अनुसार दक्षिण अफ्रिकाका एक व्यापारीका दुई छोराको बिहेका कारण त्यस्तो फोहोर थुप्रिएको थियो । जोशीमठ नगर निगमका..
धेरै मोबाइल चलाउनेको टाउकोमा सिँङ पलाउँदै ९ असार २०७६, सोमबार १६:१२
काठमाडौँ, ९ असार । स्मार्टफोनको लत अहिले ह्वात्तै बढेको छ । चलाउन जान्नेको हातमा पनि स्मार्टफोन, नजान्नेको हातमा पनि स्मार्टफोन । स्मार्टफोनको उपयोगीताबारे ज्ञान नभएकाले समेत तस्बिर खिच्न र खिचाउँनकै लागि स्मार्टफोन बोकेका हुन्छन् । मानिसहरू जतिखेर पनि स्मार्टफोनमा झुण्डिन..
तेलंगना राज्यका बियर पारखीले मुख्य मन्त्रीलाई भने मनपर्ने बियर खान पाइएन ८ असार २०७६, आईतवार ०१:५१
तेलंगना । राजनीतिज्ञसंग जनताका माग पनि अनौठो, अनौठो हुने । यसोत यो गर्मीको मौसम बियर पारखीहरुलाई बियरको झल्को आउनु स्वाभाविक पनि हो । मित्र राष्ट्र भारतको तेलंगना राज्यका बियर पारखीले मनपर्ने बियर खान पाउनु पर्ने माग अघि सारेका छन् । आफूलाई निकै मनपर्ने बियर बजारमा नपाएको भन्दै..
रुसमा ‘३२ हजार बर्ष’ पहिलेको ब्वाँसोको टाउको भेटियो ३२ जेष्ठ २०७६, शनिबार ०२:५३
मस्को, ३१ जेठ (एएफपी) । रुसको उत्तरधुर्वी क्षेत्रमा झण्डै ‘३२ हजार बर्ष‘ अगाडि मरेको ब्वाँसोको टाउको भेटिएको रूसी बैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । धेरै रौँहरुले ढाकिएको अवस्थामा तिरेख्ट्याख नदीको किनारमा ब्वाँसोको टाउकोको अवषेश भेटिएको उनीहरुको भनाई छ । बैज्ञानिकहरुले थोरै गिदी, नरम..
न्युयोर्कस्थित फेसबुकको कार्यालय अगाडि नग्न प्रदर्शन ३० जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०९:३८
न्युयोर्क । अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित फेसबुकको कार्यालय बाहिर सयौं महिलाहरुले निर्वस्त्र भएर प्रदर्शन गरका छन् । महिलाहरुप्रति फेसबुकले कठोर नियम अख्तियार गरेको भन्दै सेन्सरसिप विरुद्धको राष्ट्रिय गठबन्धनले कलाकार स्पेन्सर ट्युनिकको साथमा उक्त नग्न प्रदर्शनको आयोजना गरेको..
तपाइको नाम कुन अंग्रेजी अक्षरबाट सुरु भएको हो ! हेर्नुहोस अक्षर बाटत पाइको स्वभाब भाग्य र भबिस्य २३ फाल्गुन २०७५, बिहीबार १२:५०
प्राय मानिस आफ्नो नाम सधै प्यारो मान्‍ने गरिन्छ।उनीहरु आफ्नो नामको अक्षरलाई समेत बढी बढावा दिने गरेका छन्। प्राचीन कालमा पनि मानिसले नामकैको कारणबाट चुनौतीपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ। तर संसारमा ज्योतिष बिज्ञानले मानिसको नामबाट मनोबिज्ञान पढ्ने पद्धतिको विकास गरिसकेको छ।..
१५०० वर्ष पुरानो भीरमा झुण्डिएको चिनिया मन्दिर, जसले संसारलाई चकित पार्दै २३ फाल्गुन २०७५, बिहीबार १२:३५
करीब २ हजार वर्ष लगाएर बनाइएको (ग्रेट वाल) देखेरै थाहा हुन्छ चिनियाँहरु प्रचीन कालदेखि नै मेहनती थिए । चिनियाँ को मेहनतले बनेको एक प्राचीन मन्दिरले संसारलाई चकित पारेको छ । चीनको सान्सी प्रान्तमा रहेको एउटा पाइला राख्ने ठाउँ समेत नभएको भीरमा टाँसेर बनाइएको यो मन्दिर हावामा..
१५२ वर्षपछि लाग्याे खग्रास चन्द्रग्रहण १७ माघ २०७४, बुधबार १९:१८
काठमाडौं १७ माघ । चन्द्रग्रहण हुनु सामान्य खगोलिय घटना हो । तर, आज बुधबार खग्रास चन्द्रग्रहण, सुपरमुन र ब्लु-मुन तीनवटै खगोलिय घटना एकैदिन परेकाले विश्वव्यापी चर्चा छ । यो १ सय ५२ वर्षपछिको दुर्लभ खगोलिय घटना हो ।धार्मिक मान्यताअनुसार चन्द्रग्रहण लागेको समयलाई राम्रो मानिँदैन ।..
फेसबुकमा फोटो कसरी राम्राे देखाउने? यि कुरामा ध्यान दिनुहाेस २४ पुष २०७४, सोमबार १३:३९
काठमाडाैं, २४ पुस: फेसबुकमा फोटो अपलोड हुँदा पहिलाको फोटो जस्तो राम्रो नदेखिएर तपाईहामीलाई समस्या हुँदै आएको छ । फेसबुकमा करीब ३५ करोड नयाँ फोटो प्रत्येक दिन अपलोड हुन्छन् । यति धेरै फोटो अपलोड र डेटा स्टोर भएपछि फेसबुक साइट स्लो हुनु स्वभाविक हो । कहिले काहीँ त फोटो नै बिग्रने गर्छ ।..
गर्लफ्रेण्डले दिएको गिफ्ट ४७ वर्षसम्म पनि खोलिएन २४ पुष २०७४, सोमबार १३:१०
के तपाइँलाई विश्वास लाग्छ कि कुनै मानिसले आफ्नो भूपूप्रेमिकाले दिएको गिफ्टलाई ४७ वर्षसम्म सम्हालेर राख्नसक्छ । सम्हालेर राख्नेमात्र कहाँ हो र ? यी महापुरुषले त एक्स गर्लफ्रेण्डले दिएको गिफ्ट खोलेर हेरेका पनि छैनन् । क्यानडाको टोरन्टोमा बस्ने एडिअन पिअर्स नामका व्यक्तिले..
जाल हान्दै हिँड्ने सुन्दरी प्रहरी फन्दामा २३ पुष २०७२, बिहीबार ०९:१६
आफूलाई डिआइजीको छोरीको रूपमा चिनाउँदै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई ठगी र लुटपाट गर्दै हिँड्ने एक युवती प्रहरी फन्दामा परेकी छिन् । काठमाडौंका एक युवकलाई प्रेमको नाटक गरेर भारतको नयाँदिल्ली पुर्‍याई बन्धक बनाएर ब्ल्याकमेलिङ गरेपछि गुल्मी हस्तीचौरकी २३ वर्षीया सुन्दरी भगवती..
एउटा मात्र मुटुभएका जुम्ल्याए बालिकाको जन्म १३ चैत्र २०७१, शुक्रबार १२:४२
काठमाण्डौ चैत्र १३ । विश्वमै निकै दुर्लभ मानिएको घटनाको रुपमा इण्डोनेसियामा जिउ जोडिएका र एउटामात्र मुटु भएका जुम्ल्याहा बच्ची जन्मिएका छन् । छाति र पेटको भाग जोडिएका ति बच्चीहरुको दुर्लभ विशेषता भनेको यी दुबैको गरी जम्मा एउटामात्र मुटु रहेको छ । जसका कारण यी जुम्ल्याहालाई..